Breaking News | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
Comment by * In Search of Truth * April 28, 2008 @ 2:51 pm
နအဖ ဆိုသည်မှာ စစ်အုပ်စု စစ်ဘိုချုပ်တစု ၊ စိတ်နေစိတ်ထား အင်မတန် အောက်တန်းကျသော လူတစု က တိုင်းပြည် နှင့် လူမျိုး အပေါ်တွင် အနိုင်ကျင့် ယုတ်မာ ကောက်ကျစ် စဉ်းလဲရန် အတွက် ဖွဲ့စည်းထားလေရာ ၎င်းတို့အား တိုင်းသူပြည်သား အမှန်တရားကို ချစ်မြတ်နိုးသော ဒီမို သမားများ ကန့်ကွက်သည်မှာ ယုတ္တိရှိပေသည်။
တကဲ့ ပြည်သူများသည် နအဖ စစ်အုပ်စုကို လောက်တက်နေသော မစင်ပုံ ကဲ့သို့ ရွံရှာ စက်ဆုပ် ကြ၏။
အသင်သည်ကား ဤ မစင်ပုံကို လျှက်နေသော ခွေးသာသာ တိရိစ္ဆာန် ဖြစ်တော့၏။
Comment by yan April 28, 2008 @ 8:50 pm
ကိုယ်ပိုင် ဦးဏှောက်နဲ့ အကောင်း၊ အဆိုး ခွဲခြားပြီး မဲထည့်ခဲ့သည် ရှိသော် ထိုသူများ၏ ဆန္ဒကို လေးစားထိုက်ပေ၏။ သို့သော် သူများ ခိုင်းလို့ NO လုပ်သောကြောင့် NO တွေအားလုံးသည် ငတုံးတွေသာဖြစ်ချေ၏။ ဒါ့ကြောင့် ငတုံးတွေ မုံန်းလို့ နအဖ ဂုဏ်တက်ဖို့သာရှိပေ၏ ။ ရဲရင့်စွာ စဉ်းစားလော့
Comment by * In Search of Truth * April 28, 2008 @ 9:18 pm
Comment by * In Search of Truth * April 28, 2008 @ 9:25 pm
in search of truth သို့
၂ ပေါက် ၁ ပေါက် ပိတောက်မြေတဲ့ မောင်ဒိုင်း ဘလော့မှာ ဖတ်ဖူးတယ်။ မင်းတို့ ဘလော့ ဘာလဲ ဘယ်လဲ ဆိုတာ online သုံးခွင့်ရတဲ့ လူတိုင်းသိတယ်။ မင်းတို့ လို နအဖ အောက်ဆွဲ ဒေါက်တိုင် သမားတွေရဲ့ ဘလော့ကို လုံးဝ လုံးဝ ကို မလာပါ။ အချိန် မဖြုံးပါ။ လူမလာ လို့ လင်းလက် ဘလော့မှာ လာဖွပြီး ဘလော့ ကြေငြာ နေတာ သနားတယ်။ ရှက်ဖို့ ကောင်းလေစွ။
Comment by yan April 29, 2008 @ 4:06 am
တကယ်ကိုရယ်ရတယ်… ကိုယ်တိုင်လာဖတ်ကြည့်ပြီးသိသလားဆိုတော့… မဟုတ်ပဲ .. အရေမရ အဖတ်မရ အတင်းတွေပြောတဲ့ မောင်ဒိုင်ရဲ့ စကားကြောင့်ကိုး .. ကိုယ်ပိုင် ဦးဏှောက်ရှိတဲ့သူက မိမိကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်တယ်… အခုတော့ မင်းဟာ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် မချနိုင်တဲ့ ငတုံးစစ်စစ်သာဖြစ်ပေ၏.. ထို့ကြောင့် ဒီမိုငတုံးဖြစ်နေခြင်း ဖြစ်သည်၊ ဒါ့ကြောင့်မင်းတို့ကောင်တွေ ငတုံးဘ၀က မတက်ပဲ အရေမရအဖတ်မရ အတင်းဆောင်းပါးတွေနဲ့ တင်းတိမ်နေခြင်းဖြစ်၏
Comment by * In Search of Truth * April 29, 2008 @ 4:16 am
We don’t want your negative opinion. We believe our people. We say what they want to say. We do what they want to do. You must know what is the truth. Are you sure “In Search of Truth”? do u know what does it mean? If you don’t know, please don’t give it as ur name.
Comment by tinmoe May 2, 2008 @ 7:45 am